October 2020 - Page9of 18 - Amawpyay
သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေကို လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ
သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေကို လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေကို လုပ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ သူသင့်ကို မချစ်တော့ပါဘူး ။ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ ရည်းစားတွေ ပြောင်းလဲသွားရင် ခံစား ရပါတယ်။ သူတို့ကို မချစ်တော့ဘူးလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အခါ အတော်ကို ထိခိုက် ခံစားရပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေ မယ့်သူ၊ အမြဲ ဂရုစိုက်ပေးမယ့် သူကိုပဲ လိုချင်ကြပါတယ် ။ အလုပ်တွေ ဘယ်လို ပဲများများ၊ ဘယ်လိုပဲ အရေးကြီးကြီး ယောက်ျားလေးတွေဘက်က ဂရုစိုက်ရမယ်၊ ဦးစားပေး ရမယ်လို့ ယူဆကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ကို လုပ်နေပြီ …
မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့
မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့ တစ်ယောက်ထဲလည်း နေတတ်အောင်နေပါ… မင်း စိတ်ညစ်နေလား_? ငါ ဒီလိုနေလို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုပီး ကိုယ့်ဖာသာကို ပြန်ထိန်းပါ။ ဘဝအတွက် လေ့လာ သင်ယူ ပါ စာများများဖတ်ပါ သူများကို သွားပြောတာ ထက် အများကြီး သာတယ်။ မင်း ဝမ်းနည်းနေလား_? ခဏလောက် အားရပါးရ ငိုချပစ် လိုက် ပါ။ ဘယ်သူ့မှ ပြောမနေနဲ့ ပိုးပြီး မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်မဲ့သူပဲရှိတယ်။ ငိုစရာ ရှိတာ ကိုယ့်ဟာကို ငိုချလိုက် ပြီးရင် တည်ငြိမ် လာလိမ့် မယ်။ မင်း အရမ်း မွန်းကြပ်နေလား_? သီချင်းလေး ဘာလေး နားထောင် …
တစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အကြောင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးခြားတဲ့ နမိတ်များ
တစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အကြောင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးခြားတဲ့ နမိတ်များ တစ်စုံ တစ်ယောက် က သင့် အကြောင်း တွေးနေ တာကို သိနိုင်မယ် ထင်လား? သိရော သိချင်လား? ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေက သင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေ တွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြစ် ပါတယ်။ သင့်အကြောင်း တွေးတယ် ဆိုတာမှာ သင့်ကို ချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေ တွေးနေနိုင် ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကို ရန်ပြုဖို့ ထိတွေးနေ တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကိုသိထားတော့ သင်သတိထားနိုင် တာပေါ့. ကဲ..ဘယ်လိုတွေခံစား ရမလဲ ဘာတွေလဲ ဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်.. နှာချေခြင်း ဒီယုံကြည်မှု …
(၁) မိနစ် ဒေါသထွက်တိုင်း စက္ကန့် (၆ဝ) စာပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားရတာကို မမေ့ပါနဲ့
(၁) မိနစ် ဒေါသထွက်တိုင်း စက္ကန့် (၆ဝ) စာပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားရတာကို မမေ့ပါနဲ့ လူဘ၀ကြီးက တုိုတောင်းလွန်း လှပါတယ် မိတ်ဆွေ။ လူဖြစ် လာရတဲ့ ဘ၀မှာ ဒေါသတွေ မောဟတွေနဲ့ နေရတာ ပူလောင်လွန်းလှပါတယ်..ဒါကြောင့် မောဟတွေ ဒေါသတွေ ရန်လိုမှုတွေကို အဝေးမှာ ထားခဲ့ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေကြရအောင်လား…။ ၁။ စိတ်ကောင်းထားပါ…… စိတ်ကောင်းရှိသူတိုင်းဟာ လှနေပါတယ်။ ဘာမှမပိုင်ရင်တောင် …… ဒီတခုကိုတော့ ပိုင်အောင် လုပ်သင့်တယ် ။ ၂။ ဒေါသနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ..။ ဒေါသက နာကျင် မှု့တွေပေးလို့ပါ။ သင့် ကိုယ် တိုင် ကိုရော ပတ်ဝန်းကျင် ကိုရောပေါ့။ ၃။ …
ညီမလေးမငိုနဲ့တော့ ချစ်သူကအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလား? ချစ်သူက အဆက်အသွယ် မလုပ်တော့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလား? ညီမလေးရေ ကိုယ့်ကို သတိမရတဲ့ သူကို မလွမ်းဘဲ နေနိုင်အောင် နေကြည့်ပါ။ သူ တောင်နေစိမ့်သေးရင် ကိုယ်လည်း မာနလေးနဲ့ နေတတ် ရမှာပေါ့။ ချစ်သူက ဂရုမစိုက်တော့လို့ ခံစားနေ ရလား? ညီမလေးရေ…လူ့စိတ်ဆိုတာ အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်သာ ဂရုစိုက်ပါ။ ခဏတာ ရခဲ့တဲ့ ကြင်နာမှု ဆိုတာ ပီကေဝါး ရသလို၊ ခဏလေးပဲ ချိုမြိန်ပြီး အရသာ ကင်းမဲ့လာ လိမ့်မယ် ပါးစပ် အညောင်း ခံပြီး ဆက်မဝါးနဲ့ ၊ထွေးထုတ်ပစ် လိုက်ပါ။ သူ့အတွက်နေရာက အမှိုက်ပုံးထဲ ပဲလေ။ ပေးဆပ်သလို …
ရူးခါနေအောင် အချစ်ခံချင်ရင် ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုရွေးချစ်ပါ ဘဝမှာ ရူးခါနေအောင် အချစ်ခံချင် တဲ့သူတွေ ချည်းပါပဲ။ ဒီလို အချစ်မျိုး ဟာလည်း လူတိုင်းဆီက မရနိုင် ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်ထက်ငယ် တဲ့ကောင်မလေးတွေကို ချစ်မှပဲ ရနိုင် မှာပါ။ အကြောင်းရင်းလေးတွေ ကိုတော့ ပြောပြပေး မယ်နော် ။ (၁) အရမ်း စိတ်ပူတတ်တယ် ဘေဘီလေးတွေဟာ ကိုကိုတွေကို အရမ်းစိတ်ပူ တတ်ကြ ပါတယ်။ ချစ်သူကို ဘာတွေများ လုပ်နေမလဲ၊ အဆင်ရောပြေ ပါ့မလား၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ ရှိမလဲ ဆိုပြီး အမြဲစိတ်ပူ တတ်ကြပါတယ်။ ကိုကိုတွေကို လှမ်းလှမ်း Check နိုင် တာလည်း သူတို့ အပြင် …